Thursday 8th February 2018 21:24:07 in Aragtida Dadweynaha by Xafiiska Hargeysa
Marka waxsoosaarkaagu aad u hooseeyo waxa uu kugu hoggaamiyaa dakhli aad u hooseeya. Dakhliga dhabta ah ee hooseeya macnihiisu waa tashiil
hoose. Heerka tashiilka hooseeyaana waxa uu kugu hoggaaminayaa maalgashi hoose. Haddaan si kale u qoro, Soomaalilaand dhulka waxsoosaarka beer-qodashada ku fiicani waa 10%. Laakiin wakhtigan aynnu ku jirno 3% qudha ayaa la beertaa oo aan waliba sifiican looga faa’iidaysan. Halka7% uu dhul beereedku wali dihin yahay oo aan far la saarin. Dhinaca waxsoosaarka Kalluunkana marka aad eegto kaba sii daran, oo halka ay ahayd sannadkii in aynnu soo saarno 40,000 oo tan, waxa aynu soo saarnaa in ka yar 13,000 oo tan, taas macneheedu waxa weeyaan in marka 4 meelood loo qaybiyo in aynnu soo saarno hal meel intii la rabay. Waaxda kalluunku dakhliga qaranka ee guud waxa ay ku dartaa wax ka yar 2%, balse haddii sida ugu habboon looga faa’iidaysan lahaa kheyraadka kalluunka sannadkii waxa ay ku dari lahayd 100 Malyuun oo Doollar.
Tag xumaanta gaajadu waxay, nooga tagi weydey”–Abwaan Cabdi Iidaan Faarax(Mareegtawww.weedhsan.com)
Inta maanku gaajaysan yahay, guuli waa weli!”– Abwaan Hadraawi (HAL KARAAN, 1993)
Shirqool Loo Dhigay Maayirka Caasimadda Hargaysa + Xildhibaankii Shirqoolka Dhigay Oo Warbaahinta La Hadlay Iyo Arimo Xa
Ragii Shir-Qoolka Dilka Faysal Nashqadeeyay Oo Gacanta Lagu Dhigay Iyo Munaasibadii Ucid Qabsaday Oo Jawi Kala Kac Ah Ku
Dawlada Taagta Daran Ee Somaliya Oo Xabsiga Dhigtay Laba Wariye Oo Somaliland U Jooga Sucuudiga + Shirkadaha Daallo Iyo
SHIRQOOLKA CABDIRAXMAAN CIRRO EE MARAYKINKA LOOGA SOO DHIIBEY EE AH BURBURKA SOMALILILAND HA LAGA DIGTOONAADO.